IVsmile Acetal Resin-iindaba-VSmile Co., ltd
IVsmile Acetal Resin
Ixesha: 2021-07-02 I ngxelo:19
Nantsi i-Q & A nayo yonke into okhe wafuna ukuyazi malunga ne-Acetal cos Oogqirha bamazinyo baya bachaza ngesinyithi-simahla, amazinyo okufakela asuswayonamhlanje.
Yintoni i Vsmile Acetal?
I-Vsmile Acetal yi-thermoplastic e-millable enika iingcali zamazinyo kunye noogqirha bezinto zedijithali ezilungele ngokufanelekileyo iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo ezisuswayo. I-crystalline acetal copolymer inamandla amakhulu kunye nokuqina okuguqukayo, ukuxhathisa ukudinwa, ukungqubana okuphantsi, ukufuma okuphantsi, kunye nokuzinza okuhle.
Zithini izibonelelo zokufakelwa kwamazinyo okufakelwa akwenziweyo enziwe kwi-Acetal?
I-Acetal yenza i-esthetic, ihlale ixesha elide, isinyithi ngaphandle kwezinyo ezithwala amazinyo okufakelwa asuswayo. Isigulana siyakuxabisa ukuthuthuzeleka, ukukhululeka kokufaka nokususa, ukungabikho kwencasa yesinyithi, kwaye akukho kuqhuba kwe-thermal xa kuselwa iziselo ezibandayo okanye ezishushu.
Yomelele kangakanani Ngaba iAcetal?
I-Vsmile Acetal inamandla aguqukayo 85 MPA.
Njani I-acetal ishenxiswa ngenxalenye yamazinyo okufakelwa eyahlukileyo kuleyo yenziwe ngesinyithi?
Amakhonkco avuliwe le I-Acetal inokususa amazinyo okufakela ayabhetyebhetye ngakumbi kunamaqhosha esinyithi, ukuze akwazi ukubandakanya ngokupheleleyo i-undercuts. Oku kukwavumela uyilo oluncinci olungenelelayo, kuba akukho sakhiwo sezinyo esisempilweni kufuneka sisuswe ukwenza ii-preps zokuphumla.
Ngaba i Acolal discolor ngokuhamba kwexesha?
I-Acetal ifunxa phantse akukho manzi, yiyo loo nto ibonelela ngeminyaka yenkonzo ngaphandle kokulahla okanye ukwenza ivumba.
Ubuthathaka kangakanani Acetal kwiqondo lobushushu?
Izinto ze-thermoplastic ziyanyibilika kwi-392˚F, ke izinzile kakhulu kubushushu obuqhelekileyo bomzimba.
Ngaba isakhelo se-Acetal sinokuhlengahlengiswa?
Izinto eziphathekayo zilula kwaye zicocekile kunye ne-carbide burs efanayo esetyenziselwa ukulungelelanisa i-resin resin base.
Ngaba Amakhonkco e-Acetal aguqulwe?
Uhlengahlengiso oluncinci kumakhonkco lunokwenziwa isitulo ngokufudumeza ngobunono ngomoya oshushu (idangatye liya kubatshisa) okanye usebenzise iipleyiti ezishushu ngaphambili.
Ngaba i Acetal abasusekayo inxenye ufakelo sikhokelo yokufakelwa?
Izinto ezisetyenzisiweyo zisetyenziswe ngempumelelo emlonyeni emhlabeni jikelele kangangeminyaka engama-25. Ngaphezulu kwelo xesha, ukwaphuka okuxeliweyo kunqabile, kodwa nasiphi na isixhobo esisuswayo sinokuxhomekeka ekusombululeni, njl.
Ndingayilungisa I-acetal isuswe isakhelo samazinyo okanye i-clasp ukuba iyaqhekeka?
Ilabhoratri yakho inezixhobo kunye noqeqesho oluyimfuneko ngokukhawuleza nangokulula ukwenza ukulungiswa okuncinci ngaphandle kokuyila isicelo esitsha.
Ngaba uxhathisa kangakanani umbandela wokukrwela?
Isigulana kufuneka sikuphephe ukucoca iiplastikhi ngebrashi ekrwada okanye eqinileyo Nantoni na ngaphaya kwesicoci samazinyo sokuzikhusela iya kukhuseleka kwaye isebenze.
Ngaba izinto ziyanyibilika?
Ngaba Ngaba i-Acetal iyakwazi ukumelana neentsholongwane?
Awunakho ukwenza ibango; ejika ibe sisiyobisi okanye ichasane nebacteria.
Ndiyilungisa njani kwaye ndiyipolishe Isakhelo se-Acetal?
Inokuconjululwa ngepumice kunye nevili elidala.
I-PREV: Ukuntywila iZirconia
OKULANDELAYO : Ukugcinwa kweSithando somlilo
I-Vsmile yamazinyo yokuThintela ukuThwala isiQinisekiso seScrewdriver
I-Vsmile Milling Burs Roland ® iyahambelana
I-Vsmile Milling Burs Sirona ® MC X5 iyahambelana